“Dad-qalatadii Qarsoonayd” ee Dadweynaha Somalida Ogadeeniya Habeenkii Dariiqyada u Galaysay oo la Ogaaday – Rasaasa News
May 5, 2010 dilaa, Jwxo-shiil, Ogadeeniya, somalida
Magac bilaash ma baxo, Jwxo-shiil, oo noday dad-qalatada qarsoon ee dadweynaha Somalida Ogadeebiya habeenkii dariiqyada u gala, ka dib kolkii la helay xoggo dhab ah oo ku saabsan dilalkii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalooyin ka mid ah dalka.
Dilalka qarsoon ee ka dhaca dhulka Somalida Ogadeeniya ayaa aad u badanayey sanooyinkii ugu dambeeyey. Dilalkaas ayaa waxaa lagu eedayn jiray ciidamada Itobiya ee jooga dhulka Somalida Ogadeeniya, oo lalahaa waa ciidamo milatari ah oo aan sharciga ku dhaqmin, sameeyana dilal qarsoon, xadhig iyo kufsi.
Waa dhab in ciidamada dawlada Itobiya ee jooga Ogadeeniya ay marar badan sameeyaan xad gudubyo foolxun oo ay u gaystaan dadweynaha, kuwaas oo ay sabab ka dhigtaan xaalada ka jirta dhulka Somalida Ogadeeniya, balse aan marna garowsho loo helaynin xad gudub loo gaystay dad aan waxba galabsan.
Arimaha lagu eedaynayey ciidamada Itobiya, ayaa waxaa xiligan la ogaaday in uu qayb wayn ka ahaa Jwxo-shiil, oo fuliyey dilalka ugu yaabka badnaa ee lagu sameeyey dadweynaha Somalida Ogadeeniya. Arintan oo ay wax ka qoreen boggaga Internetka ee ka soo jeeda degaanka, oo maanta iyagu si fiican u soo bandhiga lana socda wax walba oo ka dhaca dhulka Somalida Ogadeeniya, ayaa Jwxo-shiil ku sheegay “dadqalatada qarsoon”.
Magaalooyinka ay dilalka qarsoon ka dhaceen waxaa ka mid ah; Godey, Wardher, Dhagaxbuur, Fiiq iyo Qabridahare oo ay ka dhacaan dilalka ugu badan ee qarsoon. Dhacdadii ugu dambaysay ayuu Jwxo-shiil ka fuliyey degmada Qabridahare oo uu ku dhintay Liqoowe Muxumed Tayse bilowgii bishii April.
Arimaha ay daahfurtay xaajo.com, ayaa noqon doona kuwo dacar horleh kiciya, dhabarkana loo saari doono Jwxo-shiil, dilalkii qarsoonaa ee ka dhacay magaalooyinka Somalida Ogadeeniya qaarkood. Qoraalka ay Xaajo.com soo bandhigtay ayay soo gaadhsiiyeen xubno daacad u ahaa Jwxo-shiil, haatanse ogaaday dhibaatooyinka qarsoon ee uu Jwxo-shiil, ku hayo dadweynaha Somalida Ogadeeniya.
Liqoowe Muxumed Tayse, oo noqday Masuulkii ugu dambeeyey ee uu Jwxo-shiil si qarsoon u dilay
Jwxo-shiil, oo Wadahadal Odayaal ka Dib, Addis Ababa Ergo Beeleed u Dirsaday